Ganacsadayaasha dharka iibka ah, ugu dhakhsaha badan moodada iyo barta | Stockmarca
Bakhaarka dharka furan
Noocyo gaar ah
AQOONSI CUSUB Macluumaad dheeraad ah!
Samee ganacsigaaga elektarooniga ah
Qaab aad u fudud ayaad ku dhisi kartaa ganacsigaaga elektaroonigga ah isla markaana aad u samayn kartaa dhibco daadinta. Ku dar buugyageena in ka badan 700 oo alaab ah oo keyd ah kuna biir adduunka internetka.
Ma leedahay dukaan internetka ah?
Haddii aadan haysan degel websaydh ayaan ku siin doonnaa mid aad jeceshahay. Iyada oo domain iyo astaamaha aad dooratay. Hadana hadaad horeyba uheysatay, ha walwelin, waxaan daryeeleynaa rakibida qalabkeena soo dejinta kaydka si aad markiiba ubilaabi karto iibinta.
Waxaan xanaaneynaa shixnadaha
Adeegyadeena daadinta waxaad heli doontaa boqolaal tixraac ah si aad guul uga gaarto dukaankaaga internetka. Uma baahnid inaad ka walwasho wax aan ka ahayn iibinta maxaa yeelay rarka annaga ayaa samaynay.
Waxaan kaa caawinaynaa suuqgeynta
Waxaan ku siin doonaa inaad marin u hesho qalabka si aad ugu xayeysiiso shabakadahaaga bulshada. Waxaan u maleyneynaa inay muhiim tahay in lagu xayeysiiyo Instagram iyo Facebook tanna, waxaan ku siineynaa gacan.
Kumanaan alaab ah oo kayd ah oo ay la socoto markab degdeg ah
Waxaan maaraynaynaa saamiyadaada
Ma waxaad tahay qeybiyaha moodada horseedka ah, kaabeyaasha iyo noocyada kabaha? Waxaan maamulnaa saamiga oo adiga ayaan kuu iibinaynaa. Waxaan leenahay khibrad iyo faylalka tacliimeed ee ballaaran oo aan u diri karno alaabadaada oo aan iibin karno adigoon wax walwal ah ka qabin.
Maxaa dufcado ku cusub
Waxaan kuugu soo bandhigeynaa fara badan oo moodada jumlo ah oo qiimo jaban ku kacaya. Noocyada ugu fiican ee wata shixnadaha degdegga ah ee alaabada ku leh bakhaarradeena gaarka ah. Waxaan la qabsan doonaa baahiyahaaga iyo miisaaniyaddaada.
Qalab Ragga Qalab Badan
Buffalo FW Kabaha Haweenka
Buffalo SS Haweenka Kabaha Badan
Kabaha Crocs Lot
Lot Michael Kors Naag
Naag Jecel Moschino Naag
LiuJo Haweeney Luudh
Lot Karl Lagerfeld Haweeney
CLK Ragga Dharka Polo-ga ee ragga
Napapijri Man Dharka Dharka
Luudka Dharka Ragga ee Sorbino
Lot Fila Kabaha Ragga iyo Haweenka
Dharka dharka loogu talagalay carruurta (Guga-Xagaaga)
Badan QGuapa Milano SS21
Etiem ragga 'Tailoring Lot'
Kabo badan oo badan oo loogu talagalay Ragga iyo Haweenka
Harvey Nin iyo Naag Dharka Dharka ah
Artigli Dharka Lot
XTSY Naag Dharka Xaragada
Haweeney Franzese ah Dhar Dhar
Naqshadda Dharka ee Dumarka oo badan
Eeg waxyaabo badan oo la heli karo
Waxaan kugula soconaa tallaabo kasta si aan kuu siino adeegyada ugufiican iyo talooyinka lagama maarmaanka u ah si aad uga dhigto ku-raaxeysiga adduunka moodada inuu noqdo mid dhammaystiran.
Fur dukaankaaga dharka iyo internetka
Waxaan kaa caawin doonaa inta hawsha lagu gudajiro labadaba si loo aasaaso bakhaarkaaga loona buuxiyo waxyaabaha ugu caansan uguna caansan. Oo haddii aad u baahatid, waxaan abuurnaa shabakadaada si aad sidoo kale ugu iibin karto internetka.
Hoos u dhigida iyo iska ilow saamiyada
Adeeggeenna 'Dropshipping' waxaad ku yeelan doontaa kumanaan tixraacyo ah si aad ugu guuleysan karto dukaankaaga internetka. Ku xireynta buugga-hayaha boggaaga isla markaana daryeesho dhoofinta Maxaad lahayn degel? Waxaan kuu sameyneynaa oo ku barinaa sida loo isticmaalo.
Katalogga khadka tooska ah ayaa cusbooneysiiyaa
Waxaan dib u cusbooneysiin karnaa saamiyadayada helitaanka alaabada cusub maalin kasta iyada oo in ka badan 30.000 tixraacyo cusboonaysiin joogto ah. La tashiga si aad u siiso macaamiishaada waxa suuqa ugu badan u baahan yahay.
Adeeg iyo feejignaan
Adeegyo macmiil oo si heer sare ah loo tababaray qaybta ku saleysan dalka Spain. Iyada oo ay ka go'an tahay in ka badan 30 sano oo waayo-aragnimo ah iyo in ka badan 2000 macaamiisha Yurub oo dhan.
Ma waxaad tahay qaybiyaha ah noocyada hoggaamineed? Waxaan maamulnaa saamiga oo adiga ayaan kuu iibinaynaa. Adiga oo aanad wax walwal ah ka qabin, waxaan u dhaqmeynaa sidii dhexdhexaadiyeyaal udhaxeeya adiga iyo macaamiisha dhamaadka. Waxaan maamuleynay keydka qeybiyeyaashayada in ka badan 30 sano natiijo wax ku ool ah oo iib ah.
Waxay diirada saartay iibinta
Waxaan kaa caawineynaa marwalba inaad ka faa'ideysato dhamaan khadadka qaybinta ugu guulaha badan. Iibsiga labadaba dukaanka muuqaalka jirka iyo kanaalada tooska ah, adoo wata shahaadadaada ama adeeggayaga Xariga ka jaridda.
Hadda nooga sheeg mashruucaaga
Fur bakhaarkaaga dharka lagu iibiyo
Waxaan kaa caawinaynaa maaraynta kaydkaaga iyo beddelka sheyga, adiga oo kula wadaagaya dhammaan waayo-aragnimadeena. Bilaash, amar-bixinno, amar-bixinno, rukhsad la'aan. Shirkadda Stockmarca waxaad lahaan doontaa xorriyadda iyo xakamaynta guud ee meheraddaada si aad ugu kobciso sida aad rabto.
Waxaan rabaa inaan ogaado wax badan
IdMa ogtahay adeeggan? 🧐 Waan kaa caawinnaa
#Dhipshipping -ku waa habka dhoofinta iyo gaarsiinta
ISSOO BANDHIG QARANKEENA GAARKA AH⬅ https: //
RCROCS Lot https://stockmarca.com/portfolio-i
Naga soo raac barta Instagram
La xiriir hadda.
Waan kuu sheegi doonnaa wax walba oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad ugu bilowdo inaad ku riyootid cagtaada cagta ugu fiican. Hadana hadaad leedahay dukaan, waxaan ku siin doonaa kaydka alaabooyinka ugu fiican si aad u hesho alaab aad runtii jeceshahay oo aad iibiso. Sababtoo ah boodista maahan cabsi, waxa cabsi leh kuma noola noola rabitaanka ah in la sameeyo.
NAGA SOO wac: 667-768-353
Saacadaha xafiiska iyo adeegga macaamiisha: Isniinta ilaa Khamiista laga bilaabo 9:00 a.m. ilaa 17:30 pm iyo Jimcaha laga bilaabo 8:00 a.m. ilaa 16:30 pm
Contacto / Sobre nosotros / Noocyo gaar ah / Legal / dhoofinta
© 2020 Suuqa saamiyada